Igumbi eliphindwe kabili eline-En-suite
(442 okushiwo abanye)
Stirling, Scotland, i-United Kingdom
Ikamelo e-ikhaya eliyindawo yokuhlala ibungazwe ngu-Malcolm
Igumbi elizimele elinemibhede yabantu ababili. Igumbi linezinsiza ze-En-suite. Indawo ethule e-Stirling. Imizuzu eyi-10-15 ukuya enkabeni yedolobha. I-Off Street Parking iyatholakala. Indawo yokuphuzela utshwala iyimizuzu eyi-10 yokuhamba, umculo obukhoma nobusuku bemibuzo ngezimpelasonto nokudla kuyatholakala. Ukudla kwasekuseni kuwukuzisiza ku-Ceriel, Toast, Jam, Itiye noma Ikhofi.
Igumbi eliphindwe kabili linegumbi lokugezela le-en-suite, ikhabethe lezingubo kanye nesifuba samadrowa futhi linamadrowa aseceleni kombhede. Inodonga olufakwe u-42 inch TV kanye ne-blue ray player kanye nama-DVD athile. Kukhona nendlu yokugezela endlini ongayisebenzisa. Indlu inekhishi lesimanje, wamukelekile ukusebenzisa ifriji nemicrowave. . Indlu ine-wireless broadband kanye ne-BT vision TV. Yikhaya elinethezekile, elifudumele.
4.89(442 okushiwo abanye)
4.89 · 442 okushiwo abanye
I-Stirling iyidolobha lesimanje eliphithizelayo neliphephile elicwile emlandweni, futhi indlu iwuhambo lwemizuzu engu-15 nje ukusuka eStirling Castle, igalari yezithombe zakwaSmith Art kanye neMnyuziyamu, iKingsKnot, iJele lase-Old Town kanye neChurch of the Holyrood. I-Stirling itholakala enhliziyweni yeScotland futhi ibithathwa njengebaluleke ngokwedlulele amakhulu eminyaka. Sikumamayela ambalwa ukusuka ezindaweni zeMpi yase-Bannockburn kanye neMpi yase-Stirling Bridge. Isikhumbuzo seWallace esiseduze simi ku-Abbeycraig sinikeza imibono eyalayo emaphandleni amangalisayo aseScotland. Ezivakashini ezincane, i-Stirling inakho konke ukuphila kwasebusuku ongayilindela ngedolobha lasenyuvesi elinempilo elinezinhlobonhlobo zezindawo zokucima ukoma, amabha nezindawo zokudlela ezingaphakathi kwebanga lokuhamba elilula lefulethi. I-Stirling iyindawo efunwa kakhulu enokufinyelela kalula e-Glasgow nase-Edinburgh kanye ne-Loch Lomond, i-Trossachs National Park, kanye nama-loch nama-glens amaningi amangalisayo emnyango wakho. Izungezwe ezinye zezindawo zasemaphandleni ezinhle kakhulu e-UK futhi labo abathanda izinto zangaphandle ngeke badumale. Indlu iwuhambo lwemizuzu eyi-10 ukusuka emigwaqweni emikhulu yezitolo namabha kanye nezindawo zokudlela.
Ngizobe ngikhona ngesikhathi sokuhlala kwakho futhi ngijabule ukukunikeza imibono namathiphu okuvakasha kwakho e-Stirling. Uma ngenhlanhla kufanele ngibe ngingekho ngizokuhlelela ukuthi kube nomngane wakho ozokunakekela. Nakuba ngisho ukuthi ukungena kusuka ku-4, Uma ufika ngaphambi kwesikhathi futhi uma ngitholakala, ngiyajabula ukuhlangana nawe esiteshini sebhasi noma sesitimela futhi ungashiya izikhwama emotweni uhambe uyohlola i-Stirling futhi uzungeze ngaphandle kokuba ukuthwala izikhwama.
Ngizobe ngikhona ngesikhathi sokuhlala kwakho futhi ngijabule ukukunikeza imibono namathiphu okuvakasha kwakho e-Stirling. Uma ngenhlanhla kufanele ngibe ngingekho ngizokuhlelela u…
UMalcolm Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Stirling namaphethelo